Qaban qaabada shirweyne Maamul goboleed loogu dhisayo ilaa Lix Gobol oo ka socota Baydhabo – idalenews.com
Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in qaban qaabo xoogan oo ku aadan maamul u sameynta ilaa lix gobo ay ka socoto magaalada, iyadoo ergooyin ka kala socota gobolada ay ku qul qulayaan.
Inkastoo qorshahan uu ahaa mid in muddo ah la soo waday, hadana waxaa ka muuqata iska war qab la’aan maadaama qorshayaal maamul loogu sameynayo Gobolada Jubooyinka ay ka socoto magaalada Baydhabo, kaasoo ay ku lug leedahay Urur goboleedka IGAD.
Garoonka diyaaradaha Baydhabo ayaa maalmihii u dambeeyay ahaa mid mashquul, iyadoo ay ka degayeen siyaasiyiin, odayaal iyo mas’uuliyiin ka soo jeeda Gobolada Bay iyo Bakool.
Sidoo kale waxaa la diyaariyay goobihii shirarka lagu qaban lahaa iyo halkii la dejin lahaa ergooyinka, waxaana amaanka gacanta ku haya Ciidamada Itoobiya, AMISOM iyo kuwa dowladda.
Laakiin qorshahan maamul goboleedka ayaa la sheegayaa inuu tuhun badan ka jiro, isla markaana ay si hoose xurguf uga dhaxeyso Gudoomiyihii hore ee Baarlamaanka Shariif Xasan oo ololaha maamul goboleedka qeyb ka ah iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka Prof, Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari.
Xukuumada Soomaaliya ayaa dhowaan sheegtay inuu qodob dastuuri yahay in la hirgeliyo nidaamka federaalka, isla markaana ay jireen baaqyo ka soo baxayay maamulada oo ku aadanaa dhameystirka Federaalismka, maadaama dowladdu ay tahay dowlad federaal ah.
Madaxweynaha oo markii u horeysay ka qeyb galaya munaasabad ka socota mid ka mid ah Hotelada Muqdisho